२ करोड १७ लाख नागरिकलाई खोप, कहिलेदेखि कहिलेसम्म लगाइने ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
सडकमा देखिएका माग्नेहरू
पूर्व माओवादीलाई अध्यक्ष बनाएपछि एमालेमा लफडा
नेपाल बङ्गलादेश बैंक र नबिल बैंकबीच एक्विजिसनको सम्झौता
बतासलाई अपराधीजस्तो नबनाउन नाडाको चेतावनी
सडकमा पुनः कालोपत्रे गर्न निर्देशन
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहित २४ जनालाई कोरोना संक्रमण
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ३९३९ जनामा कोरोना संक्रमण
चट्याङका कारण टावरमा आगलागी
२ करोड १७ लाख नागरिकलाई खोप, कहिलेदेखि कहिलेसम्म लगाइने ?
सरकारले आगामी १७ पुससम्म लक्षित समूह २ करोड १७ लाख नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने योजना बनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको कोभिड–१९ खोपका लागि लक्षित समूहको प्राथमिकीकरणमा २ करोड १७ लाख ५६ हजार ७ सय ६३ जनालाई खोप लगाउनुपर्ने देखिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २० जेठसम्म चीन सरकारले अनुदानमा दिने भनेको १० लाख मात्रा भेरोसेल खोप आइपुग्ने जानकारी दिएका छन् ।
कोभिड–१९ विरुद्धको १० लाख मात्रा भेरोसिल खोपमध्ये २ लाख भोलि आइतबार र बाँकी ८ लाख डोज २० जेठसम्म आइपुग्नेछ ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार चीनबाट ५० लाख, अमेरिकाबाट ५० लाख र भारतबाट १७ लाख मात्रा खोपका लागि परिपत्र गरिएको छ । अस्ट्रेजेनिकाको खोप स्टकमा रहेकाले अमेरिकासँग खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको तर प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले केही ढिलो हुन सक्ने देखिएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । सन् २०२१ भित्र आमनागरिकलाई खोप लगाउनेगरी सरकार अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, भारत सरकारलाई १७ लाख कोभिसिल्ड खोप उपलब्ध गराउन सहजीकरणका लागि पत्राचार गरिएको छ । सरकारले अमेरिकी खोप निर्माता कम्पनी जोन्सोनसँग ५० लाख र चिनियाँ खोप उत्पादक सिनोफार्मसँग ५० लाख डोज खरिदका लागि प्रस्ताव पठाइसकेको छ ।
प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०७८, शनिबार ७ : २७ बजे
थप ६ हजार ७३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि